“श्रीमानको गोप्य अं’ग को आकार सानो भएको भन्दै सुनसरीकी यी युवतीले गरिन यस्तो, पुरा पढ्नुहोस। - Babal Khabar
November 3, 2020 by बबाल खबर
एक सुन्दर परिवारका लागि श्रीमान र श्रीमतीको भावना मिल्न आवश्यक हुन्छ । विवाहपछि केही सम्बन्धहरु लामो समय टिक्न सक्दैनन् । यसका पछाडी धेरै कुराहरुले महत्व राख्ने गर्दछन् । सम्बन्ध वि’च्छेद हुने कारणहरुमा विचारको मेल नहुनु प्रमुख कारण हो भने अर्को समाज पनि हो । समाजमा केही कुरा लगाउने मान्छेहरु हुँदा पनि सम्बन्ध बलियो हुन सक्दैन् । तर सधै यस्तै कारणले गर्दा मात्रै सम्बन्ध नराम्रो हुनछ भन्ने हुँदैन । भिडियोको लागी तल थिच्नुहोला।
“सन्तानका विषयमा पनि विवादहरु हुन्छन् ।जे सुकै भए पनि मुल कुरा भनेको विचार भावनासँग जोडिएर आउँछ । तर सुनसरीमा एक युवतीले विहे भएको ६ महिनामै श्रीमानको गोप्य अं’गको आकार सानो भएको भन्दै सम्बन्ध वि’च्छेद गरेकी छिन् । इनरुवा नगरपालिका २ कि ती युवतीले आफुले शारि’रीक सुख भो’ग नपाएको भन्दै सम्बन्ध वि’च्छेद गरेकी हुन् ।
“यहाँ मन मिल्यो तर जुन कुरामा मिलन हुनुपर्ने त्यसमा विमती हुन गयो । नगरपालिकाको न्यायिक समितिसम्म यो मुद्धा पुगेपछि समितिले दुबैलाई पुनः मिलेर बस्न सुझाव दिएको थियो । तर श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको गो’प्य अंग सानो भएकोले आफुलाई शारिरीक सुखभो’ग पुरा गर्न नसकेको भन्दै सम्बन्ध वि’च्छेदको लागि द’बाब दिएकी थिइन् ।
“युवतीकै दवाबमा सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय भएको न्यायिक समितिका सदस्य रञ्जेश भट्टराईले जानकारी दिए । दुबैको कुरा सुनिसकेपछि समितिले यौ’न आ’क्रन्त पालेर बस्नु भन्दा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि बाटो खुल्ला गर्दै आपसी रुपमा छुट्टिने निर्णय गरिदिएको भट्टराईले बताए । जनवोलीबाट लिइएको ।
माथिको तस्बिर केबल प्रतिका त्मक तस्बिर मात्र हो ।
Prevबाबुराम भट्टराईले नेताहरूले उपचारका नाममा गर्ने करोडाैं खर्चलार्इ लियर भने यस्तो, पुरा खबर
nextकेबल १३८ रुपैयाँमा पाइन्छ पुरै घर !! पत्यार लागेन ? पुरा खबर पढनुस